Sary natolotry ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Tsy misy adiny efatra amby roapolo sisa tavela ho an'ilay hetsika noresahiny nandritra ny andro tontolo andro eny, androany koa. Tsy fantatsika izay tena ho hitantsika rahampitso aseho ao amin'ny Yerba Buena Center ao San Francisco, fa ilay nametra tsy ho diso anjara amin'ny fotoana voatondro dia ny Apple Watch. Ny famantaranandro, na dia efa natolotra tamin'ny volana septambra aza, dia mbola manana fahaiza-manao marobe tokony haseho ary tsy misy faran'izay mamatotra.
Raha vao sambany no nahitanay azy, iray amin'ireo zavatra nahasarika ny sainay an'ity fitaovana vaovao ity avy amin'ny orinasam-paoma dia ny interface-ny. Ity dia manana endrika izay mbola tsy nahita mihitsy isika teo aloha amin'ny fitaovana Apple ary mahatonga azy io ho vokatra hafa (vao mainka aza) amin'ny lafiny rehetra.
Tsy fantatsika ny fomba fitondran'ity interface ity isan'andro sy ny fomba ahazoana azy hiasa miaraka aminy, fa ny tsy azontsika lavina dia ny manaitra azy. Noho ny endriny sy ny lokony indrindra, mety mihoatra ny iray no mety liana amin'ny fanaovana azy ho toy ny temotra amin'ny fitaovana hafa izay anananao amin'izao fotoana izao, ka ireto misy rohy sasantsasany hahafahanao misafidy izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Tsarovy fa ao amin'ny Actualidad iPhone dia holazainay aminao mivantana ny vaovao rehetra izay mitranga ao amin'ny Apple Special Event manomboka amin'ny 18:00 hariva, 9 martsa. Miandry anao izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Tianao ve ny sary mivoaka ara-tsindrimandry an'ny Apple Watch? Ireto misy vitsivitsy
Alexis ivan dia hoy izy:
Wallpaper tsara be 😀
Valiny tamin'i Alexis Ivan
Apple Watch: izay rehetra fantatsika momba ny smartwatch hatreto